မောင်ချစ်: (၁၇) ကြိမ်မြောက်ဥရောပရောက်မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ကြားလွှာ
Invitation to 17th FBE Conference in France
INVITATION TO 17th FORUM OF BURMESE IN EUROPE
La Communauté Birmane de France (The Burmese community in France) has the pleasure to cordially invite the patriotic Burmese including ethnic nationalities, who are at present residing in different European countries and around the world to actively participate in the 17th FBE conference to be held in Paris,FRANCE. The main aim of the Conference is to search for suitable strategies in restoring Democracy, Human Rights/Dignity and Social Justice in Burma, which would lead to the future Federal Republic of Burma.
Date of the Conference: July 29 and 30, 2011(Friday and Saturday)
Place: La Maison des Assosiations du 3éme,
5 Rue Perrée,
Métro: République (or) Temple
The Conference language is BURMESE
Important: All participants are required to register their participation not later than Jun 20, 2011 by email or by telephone.
Those, who fail to register by that date, are responsible for their own accommodations. The Burmese community in France can only accept 15 participants for free accommodation. Other participants will pay their accommodation hotel fees (22 Euro per day including breakfast). The participants are requested to arrive Paris Thursday, July 28 and leave Paris on Sunday, July 31, 2011.The Burmese Community in France will welcome you at the Gare Du Nord (Paris Nord) Train Station and at the (Invalides) Paris Airport Bus Station.
The draft agenda of the Conference will be delivered on your arrival.
Please forward this invitation to your friends who might be interested to attend the FBE Conference.
For registration and further information, please feel free to contact the following person:
-Htin Kyaw Lwin, Mobil: +336 31 11 28 62, Home: +331 48 21 71 25
-Ko Htwe, Mobil: +336 47 69 94 44, Home: +331 43 82 34 17
-Thuta, Mobil: +336 02 20 48 21
(Burmese Community in France)
The Forum of Burmese in Europe (F B E) representsanetwork of Burmese communities across Europe and is advocating for democracy, social justice and human rights in Burma. The FBE strongly rejects the military dictatorial rule in Burma and has been working closely together with the democratic forces around the world.
ရက်စွဲ။ ။ ၆ ရက် ၊မေလ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြသောမြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေသူများဖြစ်သည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံရောက်မြန်မာလူမျိုးများအဖွဲ့ (La CommunautéBirmane de France)မှ(၁၇) ကြိမ်မြောက်ဥရောပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ဆွေးနွေးပွဲ(FBE)ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ပါရီမြို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍မြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးကို
ကျင်းပမည့်ရက်။ ။ ၂၉ ရက်နှင့် ၃၀ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။ (သောကြာ၊စနေ)
ကျင်းပမည့်အချိန်။ ။ နံနက် ၁၀ နာရီဲ မှ ညနေ ၇ နာရီထိ
ကျင်းပမည့်နေရာ။ ။ La Maison des Assosiations du 3éme,
Métro ။ ။ République (သို့ မဟုတ် ) Temple
စါရင်းပေးသွင်းထားစေလိုပါသည်။မိမိတို့အဖွဲ့ မှဆွေနွေးပွဲတက်ရောက်လာမည့့််၁၅ ဦးကိုသာလျှင် အခမဲ့တည်းခိုနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ကျန်သူများမှာတည်းခိုခန်းခတရက်လျှင်၂၂ယူရိုပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ဤညီလာခံသို့ တက်ရောက်မည့် သူများကိုတနိုင်ငံလျှင်၅ ဦး/အဖွဲ့ တဖွဲ့ လျှင်၂ဦးသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥရောပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ဆွေးနွေးပွဲ (FBE) သို့တက်ရောက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပါရီမြို့သို့(၂၈)ရက်၊ဇူလိုင်လ(ကြာသာပတေးနေ့)တွင် ရောက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး၊(၃၁) ရက်၊ဇူလိုင်လ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင်ပါရီမြို့မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာပေးရပါမည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို အဓိကအားဖြင့် မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်သာ ပြောဆိုဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား(၂၈)ရက်၊ဇူလိုင်လ(ကြာသာပတေးနေ့)တွင်ကြိုဆိုရေးအဖွဲ့မှပါရီမြို့ Gare Du Nord(Paris Nord)ဘူတာကြီးနှင့်လေယဉ်ကွင်းမှလာသောဘတ်စ်ကားများဂိတ်ဆုံးရာ Invalides ဂိတ်များမှ စောင့်ကြိုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးလိုသောအကြောင်းအရာနှင့် ခေါင်းစဉ်များကိုဇူလိုင်လ၁၅ရက်၂၀၁၁ကို နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပိုစေလိုပါသည်။ယခုဖိတ်စာကို လက်ခံရရှိပါက မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးကို စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူ့ကိုမဆို ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါသည်။ဥရောပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ဆွေးနွေးပွဲ (FBE) ကို တက်ရောက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ
- ကိုထင်ကျော်လွင် ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း +၃၃၆ ၃၁ ၁၁ ၂၈ ၆၂ ၊အိမ်ဖုန်း +၃၃၁ ၄၈ ၂၁ ၇၁ ၂၅
- ကိုထွေး ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း +၃၃၆ ၄၇ ၆၉ ၉၄ ၄၄ ၊ အိမ်ဖုန်း +၃၃၁ ၄၃ ၈၂ ၃၄ ၁၇
- ကိုသုတ ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း +၃၃၆ ၀၂ ၂၀ ၄၈ ၂၁
ရေးသူ မောင်ချစ် အချိုန် 23:45